Hlola iMilan, Italy - World Tourism Portal
Hlola iMilan, Italy
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eMilan, e-Italy.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eMilan
Bukela ividiyo emayelana noMilan
Hlola iMilan, ngokwezezimali idolobha lesibili elibaluleke kakhulu kulo Italy. Inedolobha elinabantu abaningi impela ezweni, kodwa ihlala enkabeni yedolobha elikhulu kakhulu lase-Italy. Yize kungabhekwa njengengalungile njengamanye amadolobha ase-Italiya, njengoba esebhujiswe ngokwengxenye ngokuhlaselwa ngamabhomu kweMpi Yesibili Yomhlaba, leli dolobha lizakhe kabusha laba yinhloko-dolobha yebhizinisi elichumayo. Ngamafuphi, kumvakashi, okwenza iMilan ihehe uma iqhathaniswa nezinye izindawo ukuthi leli dolobha lingaphezulu impela kwendlela yokuphila yokuzijabulisa ngezinto zomhlaba: ipharadesi lokuthenga, ibhola, i-opera nobusuku bokudla kwasebusuku. IMilan ihlala iyindawo yemakethe yemfashini yase-Italy - imfashini yama-aficionados, amasuphamakethe namaphephadazzi aphesheya kwehlela kuleli dolobha kabili ngonyaka ngamaphuzu alo entwasahlobo nasekwindla. Ungakhohliswa isici sesimanje sedolobha, ngoba lingelinye lamadolobha asendulo kakhulu eYurophu anamakhulu eminyaka womlando namagugu!
IMilan idume ngomcebo wayo wokubuka okungokomlando nokwesimanje - abakwaDuomo, esinye sezikhulu ezinkulu kakhulu futhi ezinhle kakhulu zeGothic emhlabeni, iLa Scala, enye yezindlu ezisungulwa opera ezinhle kakhulu emhlabeni, iGalleria Vittorio Emanuele, indala nobukhazikhazi igalari ebunjiwe yezitolo, igalari yobuciko yaseBrera, neminye imisebenzi yobuciko emihle kakhulu eYurophu, umbhoshongo wePirelli, isibonelo esihle kakhulu se-1960s yesakhiwo sokwakha samanje saseNtaliyane, iSan Siro, inkundla enkulu nenodumo, noma iCastello Sforzesco, inkathi ephakathi enhle isigodlo kanye ne-UNESCO's World Heritage Site Santa Maria delle Grazie Basilica, equkethe omunye wemidwebo owaziwa kakhulu emhlabeni: U-Leonardo da Vinci's The Last Supper. Uma uhlela ukuwuvakashela gcina ithikithi online, njengoba lithengiswa izinyanga ezimbalwa.
If Rome imele i-Italy "endala", iMilan imelela i-Italy "entsha". IMilan yidolobha lesimanje kakhulu kunawo wonke amadolobha ase-Italy, futhi isaqhubeka nokugcina umlando wayo owedlule.
Ekubonweni kokuqala, iMilan ibukeka iyisidlakudla futhi inesitayela (ngamafasitela wayo akhombisayo acwebezelayo nezitolo ezinhle), inenqwaba yezindlu ezinhle zasesontweni kanye namasonto amahle enkabeni, kepha kungabonakala njengokuphalaza okuncane, okungenampilo futhi nebhizinisi- indawo ethambekele Kungaba imvula impela, grey kanye nenkungu, kanti ezinye izakhiwo, zasendulo noma zanamuhla, zinokubukeka okunzima. Ngenkathi kunamapaki amaningi, iMilan ibukeka sengathi inamahlamvu amancane aluhlaza kakhulu, futhi ngaphandle kwengxenye yomlando egcinwe kahle, ezinye izindawo ezingaphandle ziyathandeka. Kodwa-ke, iMilan, ngokungafani nemizi yaseYurophu yaseYurophu ebeka ubuso bakho ebusweni, idinga ukuhlola okuningi - yithathe njengoba injalo, futhi ungajabulela ubukhazikhazi bayo bemfashini kanye nobunjalo bebhizinisi obunjengabo, kodwa ungakuthola kungahambisani kakhulu "Kuvusa amandla". Uma uchitha isikhathi, kepha uhamba ngezindawo ezinjenge-Navigli enhle, isifunda se-chic Brera, ikota e-University ethandekayo, noma amanye amasonto amancane kanye nezakhiwo, uzothola ukucabanga phambili, idolobha elihlukahlukene eligcwele kuwo wonke amagumbi umlando, kanye nenqwaba yamagugu afihliwe. Futhi, ngomlando osungulwe yaseshashalazini, umculo, izincwadi, ezemidlalo, ubuciko nemfashini, akukho okuningi ongakugeja.
UMilan, njengoba abaningi bebonile, akazizwa ngokuphelele njengengxenye ye-Italy. Ngaphandle kokufana phakathi kwamadolobha ajwayelekile ase-Italy afana neVerona noma Venice nedolobha, linomoya ohlukile. UMilan uzizwa enjengebhizinisi eliphithizelayo, elimatasa, elenziwa ngemfashini - lapho kumakhofi amaningi, abantu abaningi bema kuphela ukuze babe ne-espresso esheshayo ekhawunteni yebha, nalapho izivakashi ngezinye izikhathi zibonakala zingasenalutho kunabantu bendawo. IMilan, ngokungafani namasiko ase-Italy abomvu okwenziwe ngamatshe abomvu, impunga impela, njengoba izakhiwo eziningi zakhiwa kusetshenziswa amatshe e-limestone noma amnyama. Izakhiwo zasendulo ikakhulukazi zinohlobo lokubukeka kwe-Austrian / Germanyic neoclassical nethonya elincane laseFrance. Kodwa-ke, lapho abanye abantu behamba ngamabhayisekili ezindala, izitulo zokudlela namatafula ngaphandle ehlobo egcwele ehlobo ehlobo, nabantu behamba ngezinyawo behamba ngezinyawo, bekhotha u-ayisikhilimu noma bephethe izikhwama ezinzima zokuthenga, uMilan uyaziqhenya ngokuthi “isiNtaliyane” flair ”.
Lo mehluko phakathi kweRoma neMilan ubonakala kwizaga eziningana, njengesisho sesiNtaliyane ngomehluko wamadolobha amabili ahumusha cishe, "IRoma ngowesifazane ozinikeleyo ozinezipho zakhe zibonakala kahle, kanti uMilan uyintombazane enamahloni, eyehlisa isithunzi nengcebo yayo maningi, kepha atholakala ngesikhathi. ”
IMilan inamasango amabili asemoyeni omhlaba jikelele, isikhumulo sezindiza i-Linate kanye nesikhumulo sezindiza iMalpensa. Kwesinye isikhathi okubizwa ngokuthi yizikhumulo zezindiza ezengeziwe zikaMilan, isikhumulo sezindiza i-Bergamo sika-Orio al Serio (i-45km East) kanye nesikhumulo sezindiza i-Parma (100km South) ikakhulu sisingatha izindiza zezimali.
Isikhumulo sezindiza esikhulu samazwe omhlaba iMalpensa.
Kunezinto eziningi ongazibona eMilan - kusuka emasontweni amahle, izigodlo ezindala, iminyuziyamu emihle kakhulu, izinkundla zemidlalo yasesiteji sezwe kanye nezindlu ze-opera, amagugu amasiko, izakhiwo ezihlokomayo, imisebenzi yanamuhla yokwakha yezakhiwo nemigwaqo ethandekayo. Kepha khumbula, akubona bonke abalungile esikhungweni esiphelele - amanye amagugu amahle kakhulu angatholakala eduze kwangaphandle noma ngaphandle kweMilan. Qaphela futhi ukuthi iminyuziyamu eminingi ivaliwe ngoMsombuluko.
Eminyuziyamu - amasonto eMilan
Izikhumbuzo Zomlando eMilan
Yize engenayo indawo eluhlaza njengamanye amadolobha, iMilan inikeza amapaki nezingadi eziningana, ezisakazeke kulo lonke idolobha.
Ipaki laseSempione indawo enkulu yemvelo eluhlaza emuva kwesakhiwo saseSforzesco, futhi esinye sezindawo ezidume kakhulu futhi esithandwa kuleli dolobha. Idizayinelwe njengengadi yemvelo ebukeka kahle, kunezinto eziningi - njengechibi, i-arch ebizwa ngokuthi i-Arco della ijubane (ikhothi lokuthula), inkundla yezemidlalo yaseRoma 'amphitheatre, umbhoshongo (namuhla ophethe iJust Cavalli Hollywood ), nezici ezimbalwa ezithokozisayo. Yindawo enamaqabunga amahle ukujabulela ukuhamba nganoma isiphi isikhathi sonyaka.
IGiardini pubblici (izingadi zomphakathi) iyinkimbinkimbi yakudala yamapaki e-18th esifundeni saseMontenapoleone / Porta Venezia, eklanywe ngesitayela sengadiya yaseRoma Romantic. Ngaphakathi, ungathola ama-rockeries, izici zamanzi, imithombo, izifanekiso ezibunjiweyo kanye nezigodlo, nezinye izici ezithokozisayo. Futhi uthola iplanethiumiyamu, imnyuziyamu yomlando wemvelo, futhi ngakolunye uhlangothi lomgwaqo wasePalestro, ungathola ne-Royal opoma enobuthi namuhla ephethe iqoqo lobuciko besimanje ngaphakathi kwamahholo amahle. Izingadi zisesimweni esihle kakhulu njengoba zakhiwe eduze kwesifunda saseDuomo naseBrera, futhi ziseduze kakhulu nomgwaqo waseMontenapoleone nendawo enhle yezitolo ezungezile.
IGiardini della Guastalla (izingadi zeGuastalla) iphakathi kokudala kukaMilan (owasungulwa ngekhulu le-16th), kepha izingadi ezincane, futhi zisondele kakhulu esifundeni saseNyuvesi. Amapaki, noma kunjalo, avulelwe umphakathi kuphela ngekhulu le-20th. Ungaba nokuhamba okuhle ngaphakathi, futhi unesakhiwo esinjengeThempeli elidala futhi nohlobo lwamachibi ane-Baroque railing eyizungezile. Akusikho kude kangako neDuomo.
Okufanele ukwenze eMilan, e-Italy
IMilan yidolobha elihle ukuhambahamba futhi ubone izinto nabantu.
Ama-Exhibition Fairs - Imibukiso eminingi ibanjwa phakathi nonyaka, kusukela ezinsizeni kuya kumakhompiyutha, imishini yezimboni kanye noshokoledi. Indawo yemibukiso yakudala isenkabeni neMilan, entsha iseRho.
Uma ufuna ukubona iMilan kusuka phezulu ungaya ophahleni lwaseDuomo (ngezitebhisi noma nge-lifti), phakathi kwezikhala nezibazi. Kungokuhlangenwe nakho okuhle kombono omangalisayo wedolobha. Okunye ukukhetha yiBranca Tower (isitaladi i-Camoens, eduze kwe-Triennale, ngaphakathi kweSempione Park), eyakhelwe e-1933 ngomakhi wezakhiwo uGiò Ponti. Umbhoshongo uphakeme nge-108 m.
IMilan igcwele izinto ezikhangayo. Ubuciko beminyuziyamu nokuklama. Ukudla nge-cuisine ejwayelekile. Kwenziwe e-Italy imikhiqizo ongayithola ezitolo eziningi ezahlukahlukene. Luhlaza okokuthuthuka kwakamuva kweMilan njengedolobha elihlakaniphile. Ungaqasha ukwabelana ngemoto kagesi futhi uvakashele idolobha ngezinsizakalo zokuqasha ibhayisekili.
Yini ongayithenga eMilan
Yize iMilan ingumuzi oguqula umqondo wayo masinyane njengoba imfashini ifika ihambe, ihlala ingenye yezindawo eziqinile zokupheka kwendabuko zase-Italy, lapho izinto zasekhaya zisanconywa futhi zaziswa kakhulu. Kukhona ama-trattorias, ama-enoteche (imigoqo yewayini) nezindawo zokudlela (kufaka phakathi okunethezeka) yonke indawo enikeza izitsha zendabuko zaseMilanese nezase-Italiya. Ukupheka kwendabuko kwaleli dolobha kususelwa ekugcwaliseni izitsha ezinjenge-osso buco (ama-veal shanks ama-veal) nama-risotto alla milanese (inkukhu-umhluzi wenkukhu eyenziwe ngesaffron).
Izikhathi zokudla zivame ukuba ngumthunzi ngaphambili kunokuba ungene Rome noma uFlorence, ngokudla kwasemini ngokuvamile kudliwe phakathi kwe-12: 30PM ne-2: 30PM nesidlo sakusihlwa kusuka ku-7: 30PM kuya ku-9: 30PM. Ukudla kwakusihlwa, futhi kwesinye isikhathi kwasemini, kuvame ukwandulelwa yileso sikhungo esikhulu seMilanese, i-aperitivo — ingilazi ye wayini ebhebhethekisayo noma isoda laseCampari kubha yehhotela eliyinkimbinkimbi.
Izindawo zokudlela zamaShayina zitholakala ikakhulu ngePaolo Sarpi, inhliziyo yeMilan's Chinatown.
Vikela izindawo zokudlela ezungeze iDuomo, zivame ukuba yizindawo zokuvakasha kuphela, ngokudla kwekhwalithi ephansi ngamanani entengo. Gwema izindawo zokudlela noma zokudlela ezinhle eziseduze kwesiteshi esikhulu.
Ngezinketho zangempela zokudlela zasendaweni, zama ukudla nezindawo ngokwazo. I-BonAppetour yindlela enhle yokuthola abapheki bendawo baseMilanese abangathanda ukuba nawe udle isidlo sakusihlwa. Kuyindlela enhle yokwenza abangane ngokudla okwenziwe ekhaya, kanye nenkampani.
Eminyakeni eminingana eyedlule, uMilan usungule inguqulo yasendaweni ye-Aperitivo noma i-Happy Hour. AmaNtaliyane aphuza ngokweqile futhi “ihora elijabulisayo” akusona isiphuzo, kepha umcimbi wokuzijabulisa.
Kucishe kusuka ku-7PM kuya kwi-9PM, imigoqo eminingi inikezela ngeziphuzo namazwibela ngentengo engaguquki (€ 5-8 ngayinye), kuhambisana nama-buffets amahhala we-all-you-can-buffets ngama-snacks, ama-pastas, namanye ama-appetizer amancane. Kepha qaphela ukuthi ungadidanisi i- “aperitivo” ngokuthi “isidlo sakusihlwa samahhala”. Kungamnandi ukujatshulelwa ngesiphuzo. AmaNtaliyane azokubona ngokushesha njenge-buffoon- futhi kubukeka njengokuthambekele kokugcwalisa ukudla ngomunwe ngesikhathi sokudla kwakusihlwa, noma kujwayelekile ukubabona benza njalo.
IMilan, njengedolobha elikhulu, igcwele izinhlobo ezahlukahlukene zokudla okusheshayo, kusuka kuma-giants angaphandle namaketanga kazwelonke, ukuya kumahhala okuthatha okungezimele kanye nemigoqo yesamishi. Izindawo zokudlela eziningi ezisheshayo zitholakala ezindaweni eziseDuomo, eBuenos Aires naseziteshini eziphakathi nendawo, ngoba yilezi ezigcwele kakhulu futhi zimatasa kakhulu edolobheni. EPiazza Duomo naseGalleria, umuntu angathola ukudla okusheshayo komhlaba jikelele okufana neMcDonald's kanye neBurger King, kepha kutholakala namaketanga ase-Italy anjenge-Autogrill. Amaketanga anjalo okudla okusheshayo ase-Italy, njengeSpizzico, iCiao ne-Autogrill atholakala kulo lonke idolobha. Kunezitolo eziningana zeCiao ezindaweni ezifana no. I-12 Corso Europa noma cha. I-54 Via Montebianco, neyeMcDonald's, uthola indawo yokudlela ePiazza del Duomo naseGalleria, futhi nabanye eCorso Buenos Aires, nabanye abanye ezindaweni ezinjengeCorso Vercelli noma iPiazzale Lotto.
Yize iMilan ingenakuzitshela ukuthi iyindawo yokuzalwa ye-pizza, (leso simangalo singeso Naples), usengathola ama-pizza amahle eMilan. Izindawo ezingcono kakhulu zepizza eduze neMarghera Street.
Uma endaweni yaseNyakatho-mpumalanga, kunama-pizzerias amaningi amancane nge-Flevio Testi (isandiso esisenyakatho se-viale Zara) endaweni yaseGreco.
E-Milan, i-pizza ijwayele ukudliwa ngommese nemfoloko, kepha empeleni ukudla ngezandla zomuntu kungenzeka futhi kwamukelekile. Abantu abaningi bakwenza bobabili.
Ehlobo jabulela i-gelato, i-ayisikhilimu enhle kakhulu yase-Italy. Uhlobo lwekhwalithi "i-gelato artigianale" libonisa ama-gelaterias akhiqiza owawo ama-ayisikhilimu, ngaphandle kokusebenza ezimboni. Amabhisikidi avulwa zonke izinsuku; ungakujabulela ukudla okuhlobene nokudla okuhlobene nesinkwa okungabizi kakhulu, okufana ne-pizza ne-focaccia. Ungathola i-bakery cishe yonke indawo eMilan, ngisho nasendaweni yaseDuomo, futhi kungenye indlela enhle yemigoqo yokudlela kwasemini esheshayo.
Indawo elula nesobala kunazo zonke yokuphuza e-Milan ingumthombo wokuphuza - kukhona imithwalo yabo ezungeze idolobha! Faka umunwe wakho emlonyeni wesikhukhu sikadrako ukwenza umthombo wamanzi ukhiphe umgodi okhethekile ekhanda.
Kukhona imigoqo namakhekhe amaningi eMilan yazo zonke izinhlobo - kusukela ezindala ezinemfashini yakudala, lapho ungakujabulela khona isiphuzo esishisayo, ukuya ezindaweni zanamuhla, nezindawo zentsha ngehora elijabulisayo / isiphuzo sebusuku kakhulu. Abanye baphinde banikeze nokudla.
IMilan inezindawo eziningi ezahlukahlukene lapho ungazijabulisa khona. Indawo enhle yokuqala yiComo Avenue (iCorso Como), eduze kwesiteshi saseGaribaldi, esigcwele imigoqo namakilabhu amahle. Ehlobo, lo mgwaqo ugcwele abantu abasha nabakhangayo.
Enye indawo lapho ungaya khona ikota yeNavigli, eduze kwasePorta Ticinese Avenue neXXIV Maggio Square, lapho ungathola khona izindawo eziningi ezincanyana, amathofi omoya avulekile kanye nezindawo zokudlela ezihamba ngemisele yemanzi (navigli). Kuma-pubs amaningi nemigoqo ungathola incwajana yamahhala ebizwa ngokuthi yi-Zero2 eyisiqondisi kuMilan Nightlife: uma ungazi ukuthi wenzeni noma uye kuphi, yibambe!
Ezinye izindawo ezidumile zasebusuku ngemigoqo futhi abantu badlula eMonte Nero (ngoLwesithathu kugcwele abantu bepiyaza phambi komugqa obizwa ngokuthi “Momo”), Piazzale Susa (nendawo yaseCitta 'Studi). Ubusuku bugcwele kakhulu eColonne di San Lorenzo (engekude nekota yeNavigli), nasendaweni ephakeme yeLatin Latin-Brera. Enye indawo enhle yingxenye yabahamba ngezinyawo eCorso Sempione eduzane ne- “Peace Arch” (i-Arco della Pace).
Kukhona imigoqo futhi amaklabhu avulwa isonto lonke kodwa imvamisa abantu abahamba ebusuku ngoMsombuluko nangoMsombuluko noma ngoLwesibili, iningi lithanda ukuzijabulisa ngoLwesine, uLwesihlanu nangoMgqibelo. Kodwa-ke, ngoLwesithathu ebusuku kubukeka kungenye yezindawo eziphola kunazo zonke ukuphuma emakilabhini ajwayelekile e-VIP.
UMilan unendawo ehlukile yeklabhu, enenqwaba yabadlali abenza amaqembu omculo we-elektroniki ngaphandle kwamaqembu. Ama-Ultra ashibhile, ngaso sonke isikhathi endaweni ehlukile (indawo yokuhlala, izindawo zokugcina, amapulazi, amachibi, namapaki amadolobha) lezo zinhlobo zamaqembu ziheha abantu abaneminyaka engu-20-28.
ILake Como— Ichibi elikhulu, elihlaba umxhwele, elihle ezintabeni ze-Alps. Bona amadolobhana aseComo, Menaggio, Bellagio naseVarenna. Isonto lama-gothic lihle kakhulu. IVarenna, maphakathi neLake Como, e-Italy Alps, ingafinyelelwa izitimela ezijwayelekile (ihora le-1 kanye nohambo lwe-3 imizuzu) ukusuka esiteshini sesitimela iMilano Centrale. Amathikithi angathengwa emishinini yamathikithi ezenzakalelayo esiteshini iMilano Centrale. Qiniseka ukuthi uthenge amathikithi ohambo lokuya nokubuya njengoba amathikithi engeke athengwe esiteshini saseVarenna! Ukusuka eVarenna, ama-feri ejwayelekile futhi angabizi kakhulu atholakala eBellagio naseMenaggio.
Certosa di Pavia charter indlu - ngempela kufanele ubone isikhumbuzo! Muhle njengenkemba yesikhumbuzo yaseDuomo, eyakhiwe ngemabula efanayo ebomvu futhi eqoshwe ngesithombe esihle kakhulu sokuphinda ubonakale. Izindawo zangaphakathi zibabazekayo futhi zinhle, okwenza iCertosa yasePavia ibe ngesinye sezikhumbuzo zesonto ezinhle kakhulu zeLombardy.
IMonza - Idolobha eliphakathi nendawo elinesizinda esihle sabantu abahamba ngezinyawo, isonto elihle ngempela (imnyuziyamu yendawo yokuhlala umqhele wenkathi ephakathi yamakhosi aseLongobard, umqhele wokuqala owakhelwa ukufaka inkosi umqhele! Kuthiwa wafezeka ngameva) of Christ’s Cross), nepaki emangalisayo, iParco di Monza, okuyipaki elikhulu kakhulu elivalekile eYurophu. Ngaphakathi kwepaki ungathola iVilla Reale yaseMonza, enye yezigodlo zobukhosi ezinhle kakhulu ze Italy, eyakhiwe ngesitayela seNeoclassical nguLeopold Pollack ngasekupheleni kwekhulu le-XVIII. Ngaphandle kwalapho, ngaphakathi kwepaki kune-Autodromo Nazionale lapho IFomula 1 GP, Superbike nezinye izinhlanga ezincane zenzeka khona.
I-villa Reale di Monza Royal Palace
IBergamo— idolobha laseyunivesithi elisendaweni ebunjiwe yaseRenaissance. IBergamo isetshenziswa izitimela ezijwayelekile namabhasi.
Crespi d'Adda - Idolobha lezimboni elihleliwe phakathi kweBergamo neMilan. Kubhalwe kuLuhlu Lwamagugu Emhlaba lwe-UNESCO.
ILake Garda — Ichibi Elihle elinamadolobha amaningi amahle, elihamba phambili yiSirmione. Amapaki amakhulu amakhulu omxholo aseduze: IGardaland, ehamba phambili e-Italy, naseCanevaworld Resort, ikhaya laseM Movieland (ipaki yetimu yamabhayisikobho) nepaki yamanzi. Itholakala ngendlela yezitimela ezijwayelekile (imizuzu ye-65-85 esiteshini saseCentrale) namabhasi. Kugcwele kakhulu ngesikhathi sasehlobo nangezimpelasonto.
I-Oltrepò Pavese - Isifunda seWine saseLombardy, cishe nge-70 km eningizimu yeMilan, kuwufanele usuku noma uhambo lwangempelasonto lokuphumula, ukuhamba noma umjikelezo futhi sibe ne-Italian ngeSonto brunch kwesinye sezindawo zokudlela ezinhle kakhulu zasendaweni.
ICremona iyisikhungo sedolobha elihle elinomlando omuhle kakhulu nesonto elihle kakhulu eLombardy ngemuva kwesonto laseDuomo eMilan. Igcwele amafresco abaluleke kakhulu, kufanelekile ukuvakashelwa.
Uhambo ngaphandle kwemoto: Awudingi imoto ukuze ubalekele ibhizinisi, ithrafikhi, ukugcwala, inkungu ngesikhathi sasebusika, ne-die (ukushisa okushisa ehlobo), yedolobha laseMilan emhlabeni omnandi wamachibi , izintaba, izinqaba nokudla okuhle: vele uthathe isitimela futhi, kwesinye isikhathi, isikebhe.
Ukuhamba Ngebhiking: Kusukela ku-24th May Square kunomgwaqo ongcono kakhulu futhi omude kakhulu ngebhayisekili ngakwesokunxele (enyakatho) yebhange lomsele. Qaphela ukuthatha i-Naviglio Grande (ukuya entshonalanga osebeni olusenyakatho lomsele) bese uyilandela uma nje ufuna. Ngemuva kwamakhilomitha ambalwa uzofika kwiChiesetta di San Cristoforo enhle, indawo edumile yemishado. Uma uqeqeshiwe kahle, qhubeka emaphandleni. Cishe i-10 km ukuya eGaggiano, idolobhana elihle kakhulu nelincane, ne20 km ukuya e-Abbiategrasso. Uma usesimweni sokugibela, landela umsele ngakwesokunene futhi ufike kuRobecco sul Naviglio.